Sida loo dayactiro Rakibidda ama Xadgudub WordPress ah
Qof macmiil ah ayaa isoo wacay toddobaadkan isaga oo ka cabanaya in boggooda loo xiray sababo la xiriira koodh xun oo laga helay. Waxay ahayd degel WordPress ah oo ku jiray server la wadaago. Halkii aan ka faaruqi lahaa fayl kasta oo ku yaal bog kasta oo ka mid ah serverka si loo aqoonsado qoraalka duritaanka, waxaan awoodnay inaan dib u helno bogga WordPress oo aan si dhakhso leh ugu shaqeyno tallaabooyinka soo socda:
Ka qaadista wixii aan la isticmaalin, duug ah ama aan caan ahayn Plugins WordPress. Fidiyayaashu badanaa waa isha koodhka xaasidnimada leh maxaa yeelay qaar badan oo ka mid ah soo-saareyaasha wax-soo-saarku uma shaqeeyaan si ay u sugaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin.
Wax ka qorista dhammaan tilmaamaha rakibidda WordPress, marka laga reebo wp-content. Wp-content waa galka ay ku yaalliin dhammaan maktabadahaaga warbaahineed ee la soo dhejiyay iyo mawduucyada ku jira - markaa ma doonaysid inaad ka saarto!
Dib u eegis oo dhan theme iyo plugin files si loo hubiyo in ay jirto ma aha code in aanad garan. Qaabka duritaanka ee hadda jira caadi ahaan waa iframe goobta saddexaad (badiyaa Shiineys ah), ama qayb sir ah oo koodh ah oo ku taal dusha sare ee dhammaan bogagga PHP. Waxaad u baahan doontaa in la helo iyo ka saari ama u nadiifiso dhammaan faylasha cudurka. Mararka qaarkood waxay u baahan doontaa qoraal ku shaqeynaya serverkaaga si loo hubiyo in tan la fuliyay. Akhriso Jooji Badware Wixii macluumaad dheeraad ah.
Haddii bartaadu aysan hore uga diiwaan gashanayn Raadinta Raadinta Google, waxaad u baahan doontaa inaad diiwaangeliso. Haddii aad ku aragto digniinta furin ee bartaada, waxaad u maleynaysaa inaad farriin ku yeelan doonto sanduuqaaga Webmaster oo kugula talin doona in goobta looga saaray arrinta darteed. Haddii aad hubto in bartaadu hadda nadiif tahay, waad awoodaa codso dib u soo celinta.
Ku helitaanka maamulka mashiinnada raadinta waa ku filan tahay - in loo aqoonsado degel xun ama bogga wax lagu iibsado maahan hab lagu tilmaamo mashiinnada raadinta! Kaliya maahan daalacayaashu sida caadiga ah inay xiraan bogga, xitaa emayllada tilmaamaya bogga waxaa xayiray macaamiisha emaylka casriga ah sida PostBox.
Dabcan, habka ugu fudud ee lagu hubin karo in aan lagugu jabinin ayaa ah inaad kaliya rakibto fiilooyin lagu kalsoon yahay, had iyo jeerna cusbooneysii rakibidda WordPress, oo sii wad kormeerkaaga bogga wixii dabeecad qariib ah… sida dhammaan faylasha lagu dul qoro isla taariikhda iyo waqtiga. Hayso feejignaan, saaxiibkiis WordPressians!
Farriin weyn. Tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay inaan ku xasuusto dhismaha degel WordPress ah. Mahadsanid